Xildhibaan Faarax: Nidaamka Xisbiyada Badan waxa uu ilaalinayaa dalka – Kalfadhi
Xildhibaan Faarax: Nidaamka Xisbiyada Badan waxa uu ilaalinayaa dalka
Xildhibaan Faarax Sh. Cabdulqaadir ayaa muuqaal uu soo dhigay Feysbuuggiisa waxa uu ku amaanay iney tahay wax fiican iney Dowladnimada Soomaalida u gudubto sameysashada axsaab siyaasadeed. Waxa uu yiri “Nidaamka Axsaabtu waa nidaam caalamiya. Dadka siyaasadda matalaya waa iney yeeshaan saldhig ay kasoo duulaan” ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in axsaabta siyaasaddu ay soosaari doonaan hogaamiyayaal la hubo, oo la yaqaan, oo aan lagu baraarugeyn marka ay xilka doonayaan oo kaliya. “Hogaanka meeluu kasoo baxaa jiri doonta. Dadka waa la garan doonaa. Xisbiga (Xamarweyne) waxa uu soosaari karaa dadka hogaanka noqon kara” ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
Waxa uu sheegay in marka uu qofka siyaasiga ah ka mid yahay xisbi ay aad u sahlantay in la fahmo waxa uu soo ahaa, marka uu damcayo xilalka sarsare ee dalka. Dadka deegaanka ee uu ka rabo codka ayuu sheegay iney go’aan ka gaari karaan qofka ay hubaan iney si fiican u matali doono. “War markuu deegaanka joogay, ninkan waxa uu ahaa musuq-maasuqiiste ayaa la dhihi karaa” ayuu yiri Xildhibnaaku, isaga oo tusaale ka bixinayey sida sahlan ee ay shacabku ku heli doonaan hogaamiyayaal u dhaw iyaga, marka ay xisbiyo siyaasadeed jiraan.
Waxa uu sheegay in mid ka mid ah dhibaatootinka haysta dalka ay tahay inuu markasta u yimaado hogaamiye aysan aqoon, oo ay bartaan marka uu xilka doonayo oo kaliya. “Waan soo ordayaa, dadkaan laba kalmad u sheegayaa; Alleyleh, balaayada na haystaa ninkaan baan naga bixin kara iney (dadku) iska yiraahdaan ayey xisbiyadu dalka ka ilaalinayaan” ayuu yiri Xilhdhibaan Faarax.
Intaas waxa uu raaciyey in haddii ay bataan Axsaabta Siyaasadda Dalka loo heli doono xal lagu kala saaro, laakiin in la bilaabo sameysashadooda ay muhiim u tahay dalka hadda. Waxa uu tilmaamay in aragtida qabyaaladda ee la sheego iney Soomaaliya dhibaato ku hayso uu xal u noqon doono Nidaamka Xisbiyada Badan.
Xildhibaan ah Wasiir oo beeniyey iney Jubbaland caburiso Baarlamaankeeda
Xildhibaan Dalxa: Waxaa Beesha 5-aad lagu matalayaa dagmooyinkii ay ku badnaayeen